कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले हटाएको सिइओले के के काम गरे अहिलेसम्म ?
Thursday, 12 Jan, 2017 12:52 PM
२८ पुस,काठमाडौँ । दलहरुको लामो समयको विवाद पछि नियुक्ति भएका पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै सरकारले बर्खास्त गरेको छ ।
२०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पले क्षति पुरयाएको संरचनाको निर्माण र पिडितलाई राहतको लागि भन्दै सरकारले पुर्ननिर्माण प्रँधिकराण गठन गर्यो । शुरुमा भूकम्प गएको २ महिनापछि २०७२ असार ५ गते तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गठन गरेको प्राधिकरण नेतृत्वका लागि दलहरुबिच सहमति नजुट्दा २०७२ साउन २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरीयो ।
पछि एमाले नेतृत्वको सरकारले नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक रहेका सिभिल इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त ग¥यो । दलहरुको लामो विबादपछि ल्याएका ज्ञवालीलाई आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारी भन्दै शुरुमा मातहतका कर्मचारीले असन्तुष्टी जनाए । पछि राजनीतिक सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै बुधबारदेखि बर्खास्तीमा परे ।
पुनर्निमार्णका लागि खर्च जुटाउनका लागि २०७२ असार १० गते काठमाडौंमा दाता सम्मेलन गरेर सरकारले पूनर्निर्माणका लागि खर्च जुटाएपनि भूकम्पछिका २ हिउँद र बर्खा पिडितले पालमुनि वित्ताए ।
२०७२ पुस १० गते प्राधिकरण गठन गर्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका ज्ञवालीले के के काम गरे ?
-भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण । ५ लाख ३१ हजार ९ सय ६४ धरधनीको नाम अनुदान पाउने सूचीमा समावेश । सर्भेक्षणका क्रममा करिव १६ सय इन्जिनियर परिचालन ।
-काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा भेरिफिकेसन मोडेलबाट १ लाख १५ हजार ६ सय ७१ घरको सर्भेक्षण । सर्भेक्षणका क्रममा करिव ४ सय इन्जिनियर परिचालन । ९४ हजार ७२ घरधनी अनुदान पाउने छनौट सूचीमा ।
-भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा भेरिफिकेसन मोडेलबाट सर्भेक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु । भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये अहिलेसम्म ६२ हजार १ सय ९० घर पुनर्निर्माण भएका छन् ।
-भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा ४१ हजार ३ सय ११ घर पुनर्निर्माण भएको उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा २० हजार ८ सय ७९ घरको पुनर्निर्माण जारी
-भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका झन्डै ५ लाख घरधनीसँग अनुदान सम्झौता ।
-भूकम्पबाट सुरक्षित १७ वटा घरका ढाँचा कार्यान्वयनमा । घरधनीले आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसार अरु ढाँचाका घर पनि बनाउन सक्ने । त्यसो गर्दा इन्जिनियरसँग परामर्श र भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने ।
-भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका घर मर्मत सम्भार एवं प्रवलीकरण गर्नका लागि १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्ने निर्णय ।
-भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट १ लाख ९२ हजार ९ सय ६४ गुनासा दर्ता । त्यस मध्ये केन्द्रमा १ लाख १ हजार गुनासा दर्ता । निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी आएका गुनासो सुनवाईको लागि प्राधिकरणको केन्द्रमा संयन्त्र क्रियाशील । दैनिक २२ जना इन्जिनियर यसमा संलग्न । मंसिर २४ गतेसम्म ६१ हजार ७ सय ५० गुनासा फछ्र्यौटको चरणमा । अनुदान वितरण कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि परिणाम सार्वजनिक गर्न सुरु हुने ।
- बौद्धनाथ स्तूपाको निर्माण सम्पन्न ।
-पाटन दरबार क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सम्पदाहरु मध्ये ३ वटाको निर्माण सम्पन्न । ५ वटाको निर्माण कार्य सुरु ।
-बसन्तुपर क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सम्पदाहरु मध्ये १ वटाको निर्माण सम्पन्न । ७ वटाको निर्माण कार्य सुरु ।
-भक्तपुर दरबार क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सम्पदाहरु मध्ये ३ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न । १२ वटाको निर्माण कार्य सुरु ।
-स्वयंभु दरबार क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सम्पदाहरु मध्ये ३ वटाको निर्माण सुरु ।
-पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सम्पदाहरु मध्ये २ वटाको निर्माण सुरु ।
-चाँगुनारायण क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सम्पदाहरु मध्ये १ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न । २ वटाको निर्माण कार्य सुरु ।
- विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बाहेका सम्पदाहरु मध्ये १ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न । ३९ वटाको निर्माण कार्य सुरु भएको । ३९ वटाको टेण्डर आह्वान गरिएको ।
-धरहराको पुनर्निर्माणका लागि २०७३ साल पौष मसान्तसम्म विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गर्ने ।
-प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा २०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण सम्पन्न । १६९ निर्माणको चरणमा । करिव ६ सय निर्माणको तयारी । मुख्य अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित संघ संस्थासँग सम्झौता ।
- केन्द्रीय स्तरका १८ वटा भवनहरुको प्रिफेव संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न । बाँकी भवनहरु निर्माणको प्रक्रियामा ।
-जिल्ला स्तरीय १४ वटा भवन प्रिफेव संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न ।
-२०० वटा विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न ।
-१२ विद्यालय पुनर्निर्माण जारी ।
– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरु गरी करिव ३ हजार ५ सय जनशक्ति परिचालन र२ हजार ६ सय इन्जिनियरलाई तालिम प्रदान तथा परिचालन गरेर भूकम्प गएको २० महिना अवधीमा अहिलेसम्म ६२ हजार १ सय ९० घर पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणको दावी छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा ४१ हजार ३ सय ११ घर पुनर्निर्माण भएको उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा २० हजार ८ सय ७९ घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
-२९७ खानेपानी आयोजना सम्पन्न । ९६१ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु ।
-संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्री आयोजना कार्यान्वयन इकाईद्वारा प्रस्तावित १८ किलो मिटरको निर्माण कार्य जारी ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता वापतको रकम दिन भनेपनि उनले नदिएपछि २०७३ पुस १३ गते सरकारले पहिलोपटक प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई पहिलो स्पष्टिकरण सोध्यो अनि ज्ञवालीको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले पुनः पुस २२ गते दोश्रो स्पष्टिकरण सोध्यो ।
उक्त स्पष्टिकरण पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि पुस २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गरी डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो ।